အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 197
ကာတွန်းစောငို – မြန်မာ့ဒုက္ခသည်အများ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေရမည် … ဆိုလား ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
အရှင်ပညာနန္ဒ၏ ရုပ်သံခရီးစဉ် – မဲဆောက် မြ၀တီတံတားအနီးက ဒေါ်လှရှင် (၇၃)နှစ် (ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၁) က ရိုက်ကူးခဲ့သည်)။ မေ ၁၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
သပိတ်မှောက်သံဃာတော် ဦးဇ၀န၏ မြန်မာ့အရေးဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံများ အရှင်ပညာနန္ဒ၊ ရွှေဝါရောင် ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ် / မိုးမခရုပ်သံ၊ မေ ၂ ၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
> ကွန်ကရစ်ရွာ သံမဏိတံခါးကြားမှ မျက်ရည်မှတ်တမ်းများ ရွက်လှပန်း ကိုစည်သူ နှင့် ယုံကြည်ချက်မော်ကွန်း ဦးဇဝန ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၀ (၁) လူ့ဘဝ ခရီးလမ်းတလျှောက် အကွေ့အကောက်တို့်က များပြားလှသည်။ ထို အကွေ့အကောက်တို့တွင် ဆူးငြောင့်ခလုတ်များ ချိုင့်များကလည်း ပြွန်းတီးနေသည်။ အခက်အခဲတခုကြုံလာတိုင်း တွေ့ကြုံပြီးသား အခက်အခဲများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိကြသည်။ ကြမ်းတမ်းမှုတခု ကြုံတွေ့ရပြန်လျှင်လည်း ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသော ကြမ်းတမ်းခါးသီးမှုတို့နှင့် ချိန်ထိုးကြစမြဲပင်။ ထို့အတူပင် ဦးဇင်းတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ခရီးတလျှောက် ရက်စက်မှုတခုကြုံရလျှင် ရက်စက်မှုချင်း၊ အစော်ကားခံရတာတခုကြုံရလျှင် အစော်ကားခံရတာချင်း အလေး အပေါ့ ‘ဆ’ ကြည့်မိသည့် ဖြစ်ရပ်က ဒုနဲ့ဒေး။ မိမ်ိကိုယ်ပေါ်ကျလာသော ဒုက္ခ၊ သောကတို့ကို တခုနှင့်တခု ယှဉ်ထိုးကြည့်မိတာ ရှိသလို၊ အတူဖြတ်သန်းနေသော ရဲဘော်တို့ရဲ့ အနှိပ်စက်ခံရမှုတွေအပေါ် နှိုင်းယှဉ်မိတာတွေ...
Page 197 of 198«1...194195196197198»